हाइपोथायरायडिज्म बनाम हाइपरथायरॉइडिज्म: कारणहरू, लक्षणहरू र उपचारहरू - स्वास्थ्य शिक्षा | अगस्ट 2021
प्रेस समुदाय कल्याण घरपालुवा जनावर समाचार समुदाय, कम्पनी चेकआउट कम्पनी, औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय, कल्याण औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा औषधि जानकारी कम्पनी कम्पनी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> हाइपोथायरायडिज्म बनाम हाइपरथायरायडिज्म: कारण, लक्षण, उपचार र अधिक तुलना गर्नुहोस्
हाइपोथायरायडिज्म बनाम हाइपरथायरायडिज्म: कारण, लक्षण, उपचार र अधिक तुलना गर्नुहोस्
हाइपोथायरायडिज्मरhyperthyroidismविभिन्न तरिकामा थाइरोइड समावेश गर्नुहोस्।Hyperthyroidismएक थाइरोइड परिभाषित गर्दछ कि पनि उत्पादन गर्दछधेरै थाइरोइड हर्मोन। यो पनि एक को रूप मा परिचित छओभररेटिभ थाइरोइड। तुलनात्मक रुपमा,हाइपोथायरायडिज्मधेरै धेरै यो उल्टो मुद्दा हो।हाइपोथायरायडिज्मथाइरोइड धेरै थोरै उत्पादन भएको बेला देखा पर्दछथाइरोइड हर्मोन। स्वाभाविक रूपमा, यी छुट्टै मुद्दाहरूको सामना गर्ने विधिहरू बिभिन्न भिन्न छन्। निम्न जानकारीमा कारणहरू, निदान, उपचार, र रोकथामको बारेमा बढि जान्नुहोस्।
Autoimmune रोगको प्रमुख कारण हो हाइपोथायरायडिज्म । विशिष्टस्वत: प्रतिरोध विकारको रूपमा उल्लेख छहाशिमोटोको थाइरोइडिटिस। यी दुर्लभ केसहरू फलदायी हुन्छन् जब तपाईंको आफ्नै होएन्टिबडीहरूतपाइँको थाइरोइड टिश्युलाई आक्रमण गर्नुहोस्, थाइरोइड हर्मोनको कम उत्पादनको लागि अग्रणी। यस घटनाले शरीरका विभिन्न भागहरू समेट्न सक्दछ; जे होस्, यो मा हुन्छथाइरोइड् ग्रन्थि।
स्वास्थ्य विशेषज्ञहरू अझै किन यस्तो हुन्छ भनेर एक ठोस उत्तर पत्ता छैन। अहिलेको उत्तम अनुमानहरू एलिमेन्ट्सको संयोजन हो जुन तपाईंको वरपरका साथै आनुवंशिकता पनि समावेश गर्न सक्दछ। जब माथि उल्लिखित छएन्टिबडीहरूथाईरोइडको सम्भावित हर्मोनहरू उत्पन्न गर्न सम्बन्धी, रथाइरोक्सिन,हाइपोथायरायडिज्मउठ्छ।
यदि तपाईंसँग उत्पादन गर्ने साधन छैन भनेथाइरोइड हर्मोनठीकसँग,थाइरोइड विकारहरूअपरिहार्य छन्। त्यसकारण, थाइरोइडको शल्य रूपमा हटाइएको भागहरू यो मुद्दामा चल्न सक्छ। को एक महत्वपूर्ण भाग को हटाउनेथाइरोइड् ग्रन्थिहार्मोन उत्पादन गर्ने क्षमतालाई असर गर्ने छ। यी जस्तो केसहरूलाई संभवत: इच्छित परिणामहरू उत्पादन गर्न औषधीको आवश्यकता आवश्यक पर्दछ।
अर्कोहाइपोथायरायडिज्मको साझा कारणविकिरण उपचार हो। तपाईंको कारणलेथाइरोइड् ग्रन्थिस्थिति, घाँटी र टाउकोको क्यान्सर लागि विकिरण उपचार तपाईंको असर गर्न सक्छथाइरोइड् ग्रन्थि। अन्तमा, औषधीहरूले पनि तपाइँलाई असर गर्न सक्छथाइरोइड प्रकार्यर उत्पादनहाइपोथायरायडिज्म। औषधीहरूको एक विस्तृत विविधता मा एक योगदान गर्न सक्छअविकसित थाइरोइड; यसैले, तपाईलाई सोध्नु उत्तम हुन्छस्वास्थ्य सेवाप्रभाव औषधि को बारे मा प्रदायक हुन सक्छ।
सबैभन्दा प्रमुख कारणhyperthyroidismछ Graves 'रोग । यो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितिले हर्मोनको अधिक स्राव निम्त्याउँछ। एन्टिबडीहरू हुनुको कारण थाइरोइड रिसेप्टर्सलाई थाइरोइड ग्रंथिलाई सक्रिय पार्न अधिक थाइरोइड हर्मोन उत्पादन गर्न उत्साहित गर्दछ। पछिGraves 'रोगअक्सर परिवारहरूमा देखा पर्दछ, तपाईको डाक्टरलाई भन्नु उत्तम हुन्छ यदि तपाईको एक वा बढी आफन्तहरुलाई रोग लागेको छ भने।Graves 'रोगएउटा होस्वत: प्रतिरोध विकार।
तपाइँकोप्रतिरक्षा प्रणालीत्यस्तै प्रकारले थाइरोइडलाई के हुन्छ भनेर आक्रमण गर्दछहाइपोथायरायडिज्म। यद्यपि यस अवस्थामा, आक्रमणले अधिक उत्पादनको लागि अग्रसर गर्दछथाइरोइड हर्मोन।
थाइरोइडिटिस। द्वारा हुन्छथाइरोइडको सूजन। यो सूजन एक हुन्छथाइरोइड हर्मोनचुहावट जुन प्राय तीन पूर्ण महिना सम्म रहन सक्छ। धेरै केसहरूमा, यो तर्फ पहिलो कदम होहाइपोथायरायडिज्म।
के म एकसाथ हाइड्रोकोडोन र अक्सीकोडोन लिन सक्छु?
अन्तमा, एक अधिक आयोडिन एक होhyperthyroidism को सामान्य कारण।थाइरोइड हर्मोनतपाईंको थाइरोइडमा आयोडिनको सेवनका कारण उत्पादन गरिएको हो। यो स्वाभाविक हो कि धेरै आयोडीनको अधिक उत्पादनको लागि नेतृत्व गर्दछथाइरोइड हर्मोन। औषधीमा आयोडिनको लागि आँखा बाहिर राख्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ। केहि औषधिहरू, जस्तै एमिओडेरोनमा आयोडिनको ठूलो आपूर्ति हुन्छ।
हाइपोथायरायडिज्म बनाम हाइपरथायरायडिज्मको कारण
थाइरोइडका शल्यक्रिया हटाइएका अंशहरू
ओभरएक्टिभ थाइरोइड हर्मोन
व्यक्ति संख्या जो अनुभव गरेका छन्हाइपोथायरायडिज्मतिमीलाई स्तब्ध पार्न सक्छ।हाइपोथायरायडिज्मअसर गर्छ 6.6% मा मान्छे कोसंयुक्त राज्य अमेरिकाउमेर १२ र अधिक उमेर। यी तथ्या्कहरूको रिपोर्ट गर्न सकिदैन किनभने धेरै जसो केसहरूहाइपोथायरायडिज्मनम्र छन् र व्यक्तिको जीवनमा थोरै प्रभाव गर्दछ। साथै,हाइपोथायरायडिज्मपुरुषमा भन्दा महिलामा बढी छ। उमेर समूहको हिसाबले, यो 60० बर्ष भन्दा माथि उमेरका व्यक्तिहरूको लागि सबै भन्दा साधारण हो।
फेरी पनि,hyperthyroidismपुरुषहरू भन्दा धेरै महिलाहरूमा देख्न सकिन्छ। को सटीक अनुपात पुरुषमा महिलाको 5-१ छ। कुल मिलाएर,hyperthyroidismभन्दा कम सामान्य छहाइपोथायरायडिज्म। यो १.२ को अपेक्षित प्रतिशतमा खडा हुन्छ। यद्यपि, केहि केसहरूमा यो संख्या निश्चित रूपमा बढ्न सक्छ। यो केस 50० बर्ष भन्दा माथिका महिलाको लागि हो। यी व्यक्तिको लागि, भेट हुने सम्भावनाहरूhyperthyroidism4.5.।% मा वृद्धि।
हाइपोथायरायडिज्म बनाम हाइपरथायरायडिजम व्याप्तता
१२ बर्ष भन्दा माथिका अमेरिकीहरुको 6.6%
पुरुषमा महिलाको अनुपात -1-१ छ
अमेरिकी जनसंख्याको १.२%
50.%% ती 50० बर्ष भन्दा बढी उमेरका लागि
यसको लक्षणहरू चिन्न गाह्रो छhyperthyroidism। यो मुख्यतया लक्षणहरूको गम्भिरता फरक फरक छ। थप रूपमा, धेरै संकेतहरू जीवनशैली विकल्पहरूमा श्रेय दिन सकिन्छ। उदाहरण को लागी, को कारण बुझ्न यो मुश्किल छतौल। त्यसकारण धेरैको लागि खोज्नु उत्तम होहाइपोथायरायडिज्मका लक्षणहरू।
बाहेकतौल, थकाइ दोस्रो नजर राख्नु पर्ने सबैभन्दा सामान्य लक्षण हो। किनकि यी बुढेसकालका सामान्य लक्षणहरू हुन्, यो अझै पनि तपाईंको थाइरोइड मुद्दा हो भनेर बुझ्न गाह्रो हुन सक्छ।
यस अवस्थामाhyperthyroidism, यो अलि बढी क्षमाशील छ। सामान्यतया, यो पहिचान गर्न गाह्रो छैन। यो अधिक बताउने लक्षणहरूको उपस्थितिको कारण हो। साथै, को संकेत को लागी हेर्नुहोस्Graves 'रोग, जुन नम्बर एक कारण होhyperthyroidism। आँखाहरू आँखा चिम्ल्याउने संकेत होGraves 'रोग।
हाइपोथायरायडिज्म बनाम हाइपरथायरायडिज्म लक्षण
उन्नत रगत कोलेस्ट्रॉल
नर्वस र चिन्ता
कम बारम्बार पीरियडहरू
पहिचान गर्न धेरै धेरै विधिहरू छन्हाइपोथायरायडिज्म। वास्तवमा, त्यहाँ दुई मात्र विधिहरू छन्, र केवल एक मात्र अत्यन्त कुशल मानिन्छ। एक चिकित्सा मूल्यांकन दुई तरिकाहरूमा कमजोर छ। Aस्वास्थ्य सेवाप्रदायक, वाअन्तःस्राविज्ञ, बताउन खोज्नेछ को संकेतहाइपोथायरायडिज्म ।
जहाँसम्म, माथि उल्लेख गरिएझैं, यो संकेत गर्न गाह्रो हुन सक्छ यदि लक्षणबाट आएको हो भनेहाइपोथायरायडिज्म। यसैलेरगत परीक्षणसबै भन्दा विश्वसनीय विधि हो।रक्त परीक्षणको मात्रा मापन गर्न सक्नुहुन्छथाइरोइड-उत्तेजक हार्मोन( TSH )। यसले तपाइँको अवस्थालाई जनाउँदछथाइरोइड हर्मोनउत्पादन। उच्चTSHस्तरहरूले तपाइँसँग भएको संकेत गर्दछहाइपोथायरायडिज्मतपाईंको शरीरले अधिक उत्पादन गर्न कोशिस गर्दै छ।
जस्तैहाइपोथायरायडिज्म,रगत परीक्षणको एक प्रभावकारी सूचक साबित हुन सक्छhyperthyroidism। निम्न स्तरहरूTSHतपाइँको थाइरोइड ओभररेटिभ छ भनेर प्रमाणित गर्नुहोस्।
थप रूपमा, थाइरोइड स्क्यानले स indicate्केत गर्दछ कि हुँदैन त्यहाँ पनि संकेत गर्दछhyperthyroidism। यस स्क्यानले तपाईंको थाइरोइडमा संकलन गरिएको आयोडिनको मात्रा पत्ता लगाउँदछ।
जैविक स्याउ साइडर सिरका पिउँदा फाइदा
हाइपोथायरायडिज्म बनाम हाइपरथायरायडिज्म निदान
को लागी सबैभन्दा बारम्बार उपचारहाइपोथायरायडिज्मदैनिक मौखिक औषधी हो जसलाई सिंथेटिक भनिन्छथाइरोइड हर्मोन लेभोथिरोक्साइन( सिन्थ्रोइड )। भने औषधी लिने को लक्ष्य तपाईंको सन्तुलन होहर्मोन तह। खुराकको लम्बाइ फरक हुन सक्दछ, यद्यपि प्राय जसो केसहरूमा यो जीवनका लागि आवश्यक पर्दछ। उज्यालो तर्फ, त्यहाँ धेरै थोरै छन्साइड इफेक्टको प्रयोग संग जोडिएकोलेभोथिरोक्साइन जबसम्म खुराक उपयुक्त हुन्छ।
तीन प्रमाणितको साथ उपचार विधिहरू , लडाईhyperthyroidismकम डरलाग्दो छ। पहिलो विधिमा औषधि समावेश हुन्छ। केही औषधीहरूले थाइरोइडलाई हर्मोनहरू उत्पादन गर्नबाट रोक्छ।
रेडियोधर्मी उपचार अर्को सामान्य होउपचार विकल्पर यो सामान्यतया अमेरिकी थाइरोइड एसोसिएसनको दिशानिर्देशन अनुसार उपचार को पहिलो लाइन को रूप मा मानिन्छ। विचार हार्मोन उत्पादन गरीरहेका कोषहरूलाई हटाउने हो। हार्मोनको उत्पादन घटाउने लक्ष्य बाँकी छ।
केहि केसहरूमा, डाक्टरले आंशिक वा पूरै सिफारिस गर्न सक्दछ तपाईंको हटाउनेथाइरोइड् ग्रन्थि । पछिथाइरोइडक्टोमी, तपाईंलाई थाइरोइड प्रतिस्थापनको आवश्यक पर्दछ जुन रोक्ने लक्ष्य राख्दछहाइपोथायरायडिज्म। केहि केसहरूमा, यदि प्याराथायरोइड ग्रंथिहरू — जसले क्याल्शियम सन्तुलन नियन्त्रण गर्दछ र थाइरोइड ग्रंथिको नजिकै अवस्थित छ - शल्यक्रियाको क्रममा असर गर्छ भने, तपाईंलाई क्याल्सियम प्रतिस्थापनको आवश्यकता पर्न सक्छ।
हाइपोथायरायडिज्म बनाम हाइपरथायरायडिज्म उपचार
दैनिक मौखिक औषधि (लेभोथिरोक्साइन)
आंशिक वा सम्पूर्ण हटाउनेथाइरोइड् ग्रन्थि
को जोखिम कारकहाइपोथायरायडिज्मउमेर र धेरै बाट प्रभावित छन्पारिवारिक इतिहास। विगत छ महिनामा गर्भवती महिलाहरू हुन् जोखिममा पनि कोथाइरोइड सर्तहरू। यसमा गम्भीर मुद्दाहरू समावेश छन्थाइरोइड हर्मोनको उत्पादनपरिवारमा पनि चल्न सक्छ। त्यसकारणपारिवारिक इतिहासपक्कै पनि हो कारक ।
सम्बन्धित जोखिम कारकhyperthyroidismयोगदान गर्ने जोखिमहरू भन्दा संख्यामा कम छन्हाइपोथायरायडिज्म। सुरु गर्ने हरु को लागि,पारिवारिक इतिहासखासमा जब यो आउँछ एक मुद्दा रहिरहन्छGraves 'रोग। अझै फेरी, महिलाहरूलाई थाइरोइड सम्भावित जोखिम बढी हुन्छ। अन्तमा, पुरानो बिरामीको इतिहास पनि हुन सक्छhyperthyroidism।
तपाईले कति घण्टा योजना लिनु पर्छ b
एक छपारिवारिक इतिहासकोथाइरोइड रोग
Than० भन्दा पुरानो
एक महिला हुन्
तपाईंको घाँटी वा माथिल्लो छातीमा विकिरण प्राप्त भयो
थाइरोइड सर्जरी गरेको छ
एक छस्वत: प्रतिरक्षा रोगजस्तै टाइप १ मधुमेह वा सेलिआक रोग
संग उपचार गरिएको छरेडियोधर्मी आयोडिनवाएन्टी थाइरोइड औषधि
दीर्घकालीन बिरामी व्यक्तिगत इतिहास
जोखिममा भएकाहरूको लागि नियमित स्क्रीनिंग बाहेक, रोक्नको लागि कुनै निश्चित मार्ग छैनहाइपोथायरायडिज्म। यदि तपाईंलाई थाहा छ तपाईं जोखिममा हुनुहुन्छ भने, यो नियमित तवरले जाँच गर्नु राम्रो विचार हुन सक्छ।
जस्तोहाइपोथायरायडिज्म,hyperthyroidismप्रभावकारी रूपमा रोक्न सकिदैन। हाल कुनै ज्ञात सफल विधिहरू छैनन्। जोखिम भएका व्यक्तिहरूका लागि नियमित रूपमा स्क्रिन गर्नको लागि यसले सबै अधिक महत्त्वपूर्ण बनाउँदछ।
हाइपोथायरायडिज्म बनाम हाइपरथायरायडिज्म रोकथाम
नियमित स्क्रीनिंग र परीक्षण
जब एक डाक्टर को लागीहाइपोथायरायडिज्मवाhyperthyroidism
माथि उल्लेखित लक्षणहरू मध्ये एक भन्दा बढी हुनु भनेको तपाइँले डाक्टरलाई भेट्नु पर्ने संकेत हो। किनभने प्रमुख लक्षणहरू जस्तै थकान रतौलपत्ता लगाउन गाह्रो हुन सक्छ, यो याद गर्नु महत्त्वपूर्ण छ जब यी लक्षणहरू मध्ये एक भन्दा बढी देखा पर्दछ। यसले तपाईलाई चिकित्सा सल्लाह लिनु पर्छ भन्ने तथ्यमा सुझाव दिनेछ। यो लागि रहन्छतौल घट्नुर अन्य सामान्यhyperthyroidism को लक्षण।
यसका बारे बारम्बार सोधिने प्रश्नहरूहाइपोथायरायडिज्मरhyperthyroidism
कुन खराब हो:हाइपोथायरायडिज्मवाhyperthyroidism?
Hyperthyroidism हृदय ताल मुद्दाहरूको लागि जोखिम बढाउन र एट्रियल फाइब्रिलेशनको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्दछ। यदि हाइपरथायरायडिजमको उपचार नगरेमा यो अस्टियोपोरोसिस र फ्रैक्चर हुन सक्छ। हाइपोथायरायडिज्मको तुलनामा कम जटिलताहरू हुन्छन् हाइपरथायरायडिज्मको तुलनामा।हाइपोथायरायडिज्मभन्दा धेरै बार देखा पर्दछhyperthyroidism।हाइपोथायरायडिज्मभन्दा भेट्न गाह्रो छhyperthyroidismपछितौलर थकान बुढेसकालको सामान्य लक्षण हो।
तपाईं गर्न सक्नुहुन्छhyperthyroidismरहाइपोथायरायडिज्म?
किनभने तिनीहरू एउटै सिक्काका दुई पाटा छन्, तपाईं एकै साथ हुन सक्नुहुन्न। अधिक र अपर्याप्त रकमको साथ यो असम्भव छथाइरोइड हर्मोन।
Hyperthyroidismपक्कै पनि हुन सक्छहाइपोथायरायडिज्म। यो स्विच तपाईंको बनाउने औषधिको कारणले हुन्छओभररेटिभ थाइरोइडकम सक्रिय केहि केसहरूमा, गतिविधि महत्वपूर्ण ड्रप हुनेछ, जसले परिणाम दिनेछहाइपोथायरायडिज्म।
एफडीएले अमेरिका बजारबाट रानिटिडाइनका सबै प्रकारहरू तान्दछ
यदि तपाइँ गाबापेंटिन र रक्सी मिक्स गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ?
केटामाइन 'चमत्कार डिप्रेशन ड्रग' हो?
Atenolol खुराक, फारम, र शक्तिहरू
कुन समूहहरू फ्लू जटिलताको लागि उच्च जोखिममा छन्?
के तपाईं उत्तम मौसमी एलर्जी औषधि प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ?
सिंगलकेयर के हो?
मधुमेह सर्वेक्षणले लक्षणहरू देखाउँदछ कम जीवनको गुणस्तर5बिरामीमा १ बिरामीहरूमा
एफडीएले मेटफोरमीन विस्तारित रिलीज ट्याब्लेटहरू सम्झिन्छ
सिम्बल्टा बनाम जोलोफ्ट: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
कुकुरहरूमा मधुमेह कसरी व्यवस्थापन गर्ने
एन्टीडिप्रेसन्टहरूमा जाँदैछ: साइड इफेक्टको लागि शुरुआतकर्ताको गाईड
सेक्स पछि कति बेर मैले योजना लिनु पर्छ b
वयस्कमा कसरी कान दुखेको छ
त्यहाँ वरिपरि खराब खराब चिसो भाइरस छ
singulair र zyrtec सँगै लिन सकिन्छ
जहाँ बीमा बिना चिकित्सा सेवा पाउने